२०७८ आश्विन ३० शनिबार
त्यसप’छि ३ जना किशो’रले आफ्नै साथीलाई पालैपालै…
एजेन्सी – भारतको मध्य प्रदेशमा सामूहिक क’ रणीको दर्दनाक घटना सार्वजनिक भएको छ। किशोरीलाई न शा लु प दा र्थ पिउन दिएर उनकै तीनजना साथीहरुले सामूहिक क रणी गरेको समाचार बाहिर आएको हो।
भारतीय प्रहरीका एसपी आशुतोष बागरीका अनुसार यो घटना अगस्ट २३ को हो। निजि कलेजमा फस्ट इयर पढिरहेकी एक किशोरी आफ्ना केटी साथीसहितह ३ अन्य किशोरहरुसँग घुम्न गएकी थिइन्। राति फर्किने समयमा एक युवकले उनलाई पेय प दा र्थमा न शा लु प दार्थ मिसाएर खुवाइदिएका थिए।
त्यसपछि ३ जना किशोरले उनलाई एक फ्याल्टमा लगे र पा’ लैपा’लै क’ रणी गरे। घटनाबारे जानकारी गराउन किशोरी र उनका परिवार लसूडिया थानामा गएका थिए। उक्त थानामा किशोरीले तीन किशोरहरु र आफ्ना केटी साथीहरुवि रु द्ध सामूहिक क’रणी गरेको आरोपसहित उजुरी दिएकी छिन्। प्रहरीले हाल घटनामा संलग्नहरुको खोजी गरिरहेको छ।
समाचारमा उल्लेख गरिएअनुसार क’रणी गर्नेमा आशीष, निकुल र हितेश रहेका छन्। उनीहरुले किशोरीको अ’श्लिल भि’ डियो पनि बनाएको बताइएको छ। पीडीत परिवारलाई प्रहरीले छिट्टै अ परा धीलाई पक्राउ गर्ने आश्वासन दिएको छ।
२०७८ आश्विन २१, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 788 Views
४.	त्यसप’छि ३ जना किशो’रले आफ्नै साथीलाई पालैपालै…
५.	स्कु’ल खुले लगतै यो के देख्नु पर्यो फेरि बाहि’रियो टिचर र बि’ध्यार्थि को ।(भिडियो सहित)